Downloads 43 740
Waxay abuureen 29-08-2012
Author: Project Airbus, rinjiyeeyeen by Mohammed Al-Khalifa http://www.pafs.wf
Kubad Airbus A320 in midabada shirkadda Swiss, ayaa codadka caadada, qol dalwaddii of default ah FSX A321 (la mid ah sida A320). Dayuurada diyaarad tani waa madadaalo weyn.
Swiss International Air Lines AG (gaaban: Swiss) waa airline side calanka ee Switzerland ka hawlgala adeegyada qorsheeyey in Europe iyo Waqooyiga America, South America, Africa iyo Asia. Its xarun weyn waa Airport Zurich (ZRH). airline ayaa la sameeyay ka dib markii kacday 2002 ee Swissair, Switzerland ee side hore ee calanka. Swiss waa hoosaad ka mid ah diyaaradaha Lufthansa Jarmalka, iyadoo xarunta at EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg dhow Basel, Switzerland, iyo xafiis garoonka Zurich ee Kloten, Switzerland. xafiiska shirkadda ee ka diiwaan gashan yahay in Basel.
airline wuxuu isticmaalaa Code istcimaalka ku LX in laga dhaxlaa airline Swiss gobolka Crossair (code Swissair ahaa SR). code ICAO waa SWR, dhaxlaa Swissair (Crossair ahaa CRX), si ay u sii xuquuqda gaadiidka caalamiga ah. (Wikipedia)
Airbus A320-214 Swiss oo loogu talagalay fiidiyowga Polo91240 ee Rikoooo.com